Bazi rezvehutano rakaparura mushonga mutsva uchapiwa vanhu varikurarama nehutachiwana hweHIV unonzi Dolutegravir kana kuti DTG muchidimbu.
Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezvehutano, Dr Clorata Gwanzura, vakaudza Studio 7 varipamusangano wemadzimai anorarama nehutachiwana hweHIV kuGweru vhiki yapfuura,kuti mushonga weDTG waiva wakanakisa zvikuru nokuti unodzikisa huhwandu hwehutachiwana mumuviri wemurwere munguva pfupi pfupi.
Dr Gwanzura vanoti mapiritsi eDTG achatanga kupiwa varwere vachangotanga kubatwa chirwere ichi kozotevera vose vanenge vapedza kunwa mapiritsi e Tenofovir, Lamuvudine and Efavirenz kana kuti TLE, ayo ainwiwa neruzhinji rwunorarama neHIV.
Chiremba ava vanoti bazi rehutano rinogara richiita tsvagurudzo yokuona kuti ndeupi mushonga ungave nani pakurapa chirwere ichi, nokudaro mushonga weDTG wakaonekwa kuti ndiwo mumwe wemishonga inokwanisa kudzikisa hutachiwana hweHIV mumuviri munguva pfupi pfupi.
Vanotiwo chirongwa ichi chakatangiswa mwedzi wapera zvokuti bazi rehutano riri mushishi rekudzidzisa vanamukoti nevamwe vashandi vehutano maererano nezveDTG kuti vazokwanisa kutsanangurirawo vose vachaupiwa.
Dr Gwanzura vakatsanangura zvinoreva DTG vachiti mimwe yemishonga irikuwedzerwa panemimwe inodzivirira kupararira kwechirwere che HIV munyika muno.
Vanotiwo piritsi reDTG idikidiki izvo zvicharerukira munhu wese acharinwa uye richizodzikisa hutachiwana hweHIV mumwedzi mishomanani.
Amai Isabel Dzvova, avo vanomirira kodzero dzemadzimai vanorarama nehutachiwana hweHIV, vanoti mushonga uyu wakatambirwa nemadzimai muZimbabwe, asi vanoda kudzidziswa nezvawo zvakazara.
Mukuru wesangano reMeaningful Involvement of People Living with Aids kana kuti MIPA, iro riripasi pesangano reNational Aids Council, VaSilebele Mpofu vanoti vakadzi vakawanda ndivo varikurarama nehutachiwana hweHIV.
VaMpofu vanoti varume vazhinji havadi kuongororwa ropa ravo vasati varwarisa zvokuti vanozouya chirwere chanyanyisa kuvhiringidza hutano hwavo.
Zimbabwe imwe yenyika shomanani dzemuAfrica dzatangisa kushandisa mushonga weDTG uyo wakapasiswa nenyika yeAmerica mugore ra 2013 mushure mokunge nyanzvi dzehutano dzakaona kuti waikurumidzisa kurapa vanhu vanorarama nehutachiwana hweHIV.
Sangano reWorld Health Organisation rinoti vakadzi vachirikuda kuzoita vana vanofanira kutsanangurirwa zvakadzama zviri maererano nemushonga weDTG nokuti pane pausinganwiwe kana mudzimai akazvitakura.
Masangano ePan African Positive Women’s Coalition Zimbabwe Chapter, akabatana neZimbabwe Women Living with HIV National Forum neUNAIDS, ndiwo akaunganidza madzimai makumi matatu vanotungamirira zvikwata zvevakadzi vanorarama nehutachiwana hweHIV avo vakabva kumatunhu ese enyika, kuti vauye kumusangano wekuGweru kwavaidzidziswa nekujekeserwa zviri maererano nezvemushonga mutsva uyu.
Madzimai makumi matatu aya achazonodzidzisawo vamwe maererano nezvemushonga uyu kana vadzokera kumatunhu avo.